पत्रपत्रिकाबाट – Page 43 – SidhaRekha
२०७३ जेष्ठ १९, बुधबार ०८:३६२०७३ जेष्ठ १९, बुधबार ०८:३६२०७३ जेष्ठ १९, बुधबार ०८:३६ by Ghanshyam Sagar
१५ सिडिओसहित ५१ उपसचिवको सरुवा
जेष्ठ १९, २०७३- गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार तथा अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत उपसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । मन्त्रालयले १५ जना सिडिओसहित मंगलबार ५१ तथा उपसचिवहरूको काजसरुवा गरेको हो । सिडिओका रूपमा सरुवा हुनेमा उदयबहादुर सिंह डडेल्धुरा, गञ्जबहादुर एमजी मनाङ, कृष्णबहादुर खड्का कालिकोट, मुनुका न्यौपाने तेह्रथुम, जनकराज पन्त प्युठान, किशोरकुमार चौधरी बैतडी छन् । यस्तै, प्रकाशचन्द्र अधिकारी रामेछाप, कौशलराज शर्मा अछाम, अर्जुनप्रसाद शर्मा भोजपुर, शम्भुप्रसाद मरासनी पर्वत, किरण थापा पाँचथर, केशवराज शर्मा मुगु, सुनील खनाल बझाङ, चेतराज बराल डोल्पा र खुमकान्त आचार्यको संखुवासभामा सरुवा भएको छ । इलाका प्रशासनमा सरुवा १५ जिल्लामा सिडिओका रूपमा कार्यरतलाई सहसचिव सिडिओ हुने जिल्ला तथा इप्रकामा सरुवा गरिएको छ । डडेल्धुराका प्रेम लुइँटेललाई रूपन्देही, संखुवासभाका गंग
२०७३ जेष्ठ १९, बुधबार ०८:२१२०७३ जेष्ठ १९, बुधबार ०८:२१२०७३ जेष्ठ १९, बुधबार ०८:२१ by Ghanshyam Sagar
दरबार हत्याकाण्ड रहस्य अझै खुल्न सकेन
जेष्ठ १९, २०७३- आज जेठ १९ गते । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको १४ वर्ष पुरा भएर आजबाट १५ वर्ष लागेको छ। विश्वले नै बिर्सनै नसक्ने त्यो रात सम्झँदा जीउ सिरिङ हुन्छ। राजा वीरेन्द्रको परिवारको संझना आउँछ । तर विश्वमा नै चर्चित भनेको दरबार हत्याकाण्डको रहस्य अझै खुल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री भएको बेलामा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल लगायतकाले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको वर्षौ भइसकेको छ। सो घटनामा केही पनि भएको छैन् । तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले हत्या गरेको भन्ने कुरा छानबिनपछि बनाइएको प्रतिबेदनले जनाएपनि त्यसमा अझै ठूलो जनसमूहलाई आंशका रहेको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
२०७३ जेष्ठ १५, शनिबार ०८:०८२०७३ जेष्ठ १५, शनिबार ०८:०८२०७३ जेष्ठ १५, शनिबार ०८:०८ by Ghanshyam Sagar
आज साढे दस खर्बको बजेट आउने
जेष्ठ १५, १०७३- सरकारले आउने आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट शनिबार पेस गर्दैछ । स्रोत अनुमान समितिको संशोधित सीमाअनुसार बजेट १० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो हुनु नपर्ने हो । तर अर्थ मन्त्रालयले योभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन थालेको छ । बजेटका लागि सुरुमा ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । विवादकै कारण शुक्रबार अबेरसम्म बजेटको आकार टुंगो लाग्न सकेको थिएन । स्रोतका अनुसार अस्वाभाविक वृद्धिको विपक्षमा रहेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सीमाभित्र रहनुपर्ने भनेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सचिव लोकदर्शन रेग्मी सीमाभन्दा ठूलो बजेट थेग्न सकिने पक्षमा छन् । बजेट निर्माणमा संलग्न कोर टिममा खतिवडामात्र अर्थशास्त्री हुन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ । ‘घन्टाघन्टामा बजेटको आकार बढ्दैछ', अर्थ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘म सहभागी हुँदासम्म १० खर्
२०७३ जेष्ठ १३, बिहीबार २०:२०२०७३ जेष्ठ १३, बिहीबार २०:२०२०७३ जेष्ठ १३, बिहीबार २०:२० by Ghanshyam Sagar
फुटबलर बिमल घर्तीकी बहिनीको हत्या
जेष्ठ १३, २०७३- नेपाली फुटबल टोलीका स्ट्राइकर बिमल घर्तीकी बहिनीको हत्या भएको छ । १७ वर्षकी मनिषा घर्तीमगरको बुधबार राति हत्या भएको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ । नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका ८ बुताहाको घरमा एक्लै रहेकी मनिषाको राति हत्या भएको नवलपरासी जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष प्रकाश पंगेनीले बताए । उनी कक्षा ११ मा अध्ययनरत थिइन् । आमा र छोरीसँगै घरमा बस्ने गरेको भएपनि मनिषाकी आमा बुधबार बुटबल गएकी थिइन् । राति उनी नफर्किएपछि मनिषा घरमा एक्लै थिइन् । अन्य समयमा आमा घरम नहुँदा नजिकैको घरमा रहनुभएका काका, हजुरवुबा आउने गरेको भएपनि बुधबार भने हजुबुबा पनि नआएको पंगेनीले बताए । घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न एक युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनाका बारेमा बेल्जियममा रहेका बिमल घर्तीलाई पनि जानकारी गराईएको पंगेनीले बताए । मनिषाको शव पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस
२०७३ जेष्ठ १२, बुधबार ०९:१०२०७३ जेष्ठ १२, बुधबार ०९:१०२०७३ जेष्ठ १२, बुधबार ०९:१० by Ghanshyam Sagar
चिनियाँ रेल २०२० सम्ममा
जेष्ठ १२, २०७३- चीनको रेल आउँदो सन् २०२० सम्ममा नेपाल आइपुग्ने चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले मंगलबार जनाएको छ। सो अवधिमा रसुवागढीसम्म रेलमार्ग पुग्ने र त्यसपछि काठमाडौं जोड्न सजिलो हुने जनाइएको छ। नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ। काठमाडौं जोडिएपछि रेलमार्ग वीरगन्ज लगिने र भारतको विहार क्षेत्रमा चीनसँगको व्यापारिक कारोबार पनि सजिलो हुने जनाइएको छ।
२०७३ जेष्ठ १०, सोमबार १२:१५२०७३ जेष्ठ १०, सोमबार १२:१५२०७३ जेष्ठ १०, सोमबार १२:१५ by Ghanshyam Sagar
२०७३ जेष्ठ ९, आईतवार २३:५२२०७३ जेष्ठ ९, आईतवार २३:५२२०७३ जेष्ठ ९, आईतवार २३:५२ by Ghanshyam Sagar
व्यास जानु भारतको बाटो
जेष्ठ ९, २०७३- दार्चुलाको व्यास भारत र चीन दुवैसँग सिमाना जोडिएको गाविस हो । यहाँ बस्ने शौका समुदाय बर्सेनि ६ महिना लेक र ६ महिना बेसीमा बस्छन् । गर्मीयाममा उनीहरू लेक अर्थात् आफ्नै थातथलोमा बस्छन् भने जाडोमा जिल्ला सरमुकाम खलंगा झर्छन् । यसक्रममा उनीहरू वस्तुभाउ पनि सार्छन् । यसरी बसाइ सर्नुलाई स्थानीय भाषामा कुन्चा सर्नु भनिन्छ । मनोज बडूले कान्तिपुर कोसेलीमा आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन् । खलंगाबाट २८ कोस उत्तरको व्यास पुग्न एक साता लाग्छ । क्षेत्रफलका हिसाबले जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो गाविस हो ब्यास । त्यहाँको छाङ्गरु र तिंकरगाउँमा मात्र बस्ती छन् । दशकअघिसम्म बुदीमा पनि बस्ती थियो । अहिले भने त्यहाँ अन्य समुदायका मानिसहरू गाईवस्तु पाल्न र तरकारी उत्पादनका लागि बस्छन् । समुद्र सतहबाट ३ हजार ७ सय मिटर उचाइमा पर्छ तिंकरगाउँ । व्यास गाविस जान नेपालतर्फ भरपर्दो बाटो नहुँदा भारतीय भूम
२०७३ जेष्ठ ९, आईतवार १७:१२२०७३ जेष्ठ ९, आईतवार १७:१२२०७३ जेष्ठ ९, आईतवार १७:१२ by Ghanshyam Sagar
कर्णाली जोड्दै ‘नयाँ सडक’
जेष्ठ ९, २०७३, दैलेख–सुर्खेत–जुम्ला २ सय ३६ किलोमिटर सडक पार गरे पुगिन्छ। तर, दैलेख सदरमुकामबाट कालिकोट हुँदै जुम्ला पुगे ४८ किलोमिटर सडक छोटो पर्छ । जिविसका प्राविधिकले गरेको अध्यायनले सहज र छोटो मार्ग हुने देखाएको छ। कर्णालीबासीलाई सुर्खेत झर्नलाई आरामदायी र छोटो यात्राका लागि नयाँ सडक निर्माण कार्यधमाधम भैरहेको छ। यो सडक खुलेपछि पैसामै कर्णालीसम्म सामान पुग्नेछ । नागरिक दैनिकमा गोविन्द केसीले समाचार लेखेका छन् । दैलेखमुकामदेखि महावु (कालिकोटसिमाना)सम्म पुग्न ४६ किलोमिटर पार गर्नुपर्छ । महावुबाट नाग्मघाट (कर्णाली राजमार्ग ) हुँदै जुम्लासम्म पुग्दा सुर्खेत–जुम्लाभन्दा ४८ किलोमिटर सडक छोटो पर्ने प्राविधिकले गरेको अध्यायनले जनाएको छ। अहिले दैलेख सदरमुकामदेखि महावु जोड्ने सडकमा ग्रावेलको काम भैरहेको छ । ३ करोड खर्चने गरी उक्त काम सुरु भएको हो । सडक अवरुद्ध हुन नदिन ठाँउठाँउमा कामदारहरु
२०७३ जेष्ठ ८, शनिबार ०८:४६२०७३ जेष्ठ ८, शनिबार ०८:४६२०७३ जेष्ठ ८, शनिबार ०८:४६ by Ghanshyam Sagar
नयाँ शक्तिले ३० गते पार्टी घोषणा गर्ने
जेष्ठ ८, २०७३, नयाँ शक्ति नेपालले ३० जेठमा पार्टी घोषणा गर्ने भएको छ । ३० जेठबाट तीन दिनसम्म राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर पार्टी घोषणा गरिने नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । पार्टी स्थापना दिवसका विषयमा जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले ३० जेठबाट तीन दिनसम्म चल्ने राष्ट्रिय भेलाले पार्टी घोषणा गर्ने बताए । राष्ट्रिय भेलामा करिब एक लाख मान्छे काठमाडौंमा उतार्ने उनले दावबी गरे ।
२०७३ जेष्ठ ८, शनिबार ०८:४०२०७३ जेष्ठ ८, शनिबार ०८:४०२०७३ जेष्ठ ८, शनिबार ०८:४० by Ghanshyam Sagar